BOI oo caawo daabacday in TOH iskoor walbo jebiyay 50 Crore waxna ahayn muujiyay!!! – Filimside.net
BOI oo caawo daabacday in TOH iskoor walbo jebiyay 50 Crore waxna ahayn muujiyay!!!
Mr. Perfectionist Aamir Khan ayaa la wareegay ama cagta mariyay iskoor walbo oo gudaha Hindiya ka jiray kaasi oo horey loo dhigay wuxuuna cadeeyay dhaliil walbo oo filimkiisa Thugs Of Hindostan loo soo jeediyay maalinta kowaad inaysan waxba u dhibin!
Shabakada Boxoffice India (BOI) ayaa soo daabacday in filimka Thugs Of Hindostan 50 Crore ka talaabsanayo ganacsigiisa maalinta kowaad waana iskoor taariikhi ah asigoo dhaafay filimkii Prem Ratan Dhan Payo oo 39.32 Crore keenay ahaana filimka Bollywood-ka maalinta kowaad ugu bilaabashada wanaagsan sidoo kalena Baahubali 2 oo Hindiya dhan iskoorka u heestay kaasi oo keenay 40.73 Crore maalintiisa kowaad.
Sidoo kale TOH wuxuu jebiyay iskoorkii filimka Sanju oo 46 Crore keenay Axadiisa kowaad sidoo kalena ahaa filim Hindi ah oo maalintii uu doono hala daawado ganacsiga ugu badan sameeyo.
Thugs Of Hindustan ganacsi waali ah wuxuu ka sameeyay Delhi / UP iyo Bihar asigoo halkaas Bahubali 2 ku garaacay wuxuuna Delhi/UP maalinta kowaad ka keenayaa 10 Crore waa bilaabasho taariikhi ah halka Bihar uu ka keenayo 2.50 Crore halka Rajashthan uu kasoo xareenayo 3 Crore waana bilaabasho taariikhi ah.
Qaabka uu caawo kuso socdo TOH oo 95% garaacayo meel walbo waxaa muuqato in ganacsigiisa u dhaxeyn karo 50 Crore ilaa 52 Crore waana lacag aan horey loogu fikirin inuu filim maalintiisa kowaad keeni karo balse waxay ku xirnaan doonaa ganacsigiisa ugu dambeeyo ee uu Mumbai iyo Delhi/UP ka sameeyo caawo gelinka dambe.
Hambalyo Aamir Khan iyo kooxda TOH oo wax aan suur gal aheyn in Boxoffice-ka laga sameeyo suura gal ka dhigeen.
Waxaa Aqrisay 994
mr perfectionist cid ku gaadheysa box office ma jirto xataa idinkaa dhaliilayey filmka